Yandisa inkcitho yakho kwiWebinar: IWebinar ROI Calculator | Martech Zone
Yandisa inkcitho yakho kwiWebinar: I-Webinar ROI Calculator
NgoLwesibini, Agasti 26, 2014 NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2020 UJenn Lisak Golding
Ngaba uyazi ukuba, kwi-avareji, Abathengisi be-B2B basebenzisa iindlela ezili-13 ezahlukeneyo zokuthengisa kwimibutho yabo? Andazi ngawe, kodwa lonto indinika intloko ngokucinga ngayo. Nangona kunjalo, xa ndicinga ngayo, sinceda abathengi bethu ukuba basebenzise malunga namaqhinga amaninzi minyaka le kwaye elo nani linyuka kuphela njengoko abalamlamli begcwele ngakumbi. Njengabarhwebi, kufuneka sibeke phambili ixesha nendawo esiza kulichitha kuyo okanye asisayi kuze senze nto!
Malunga nonyaka ophelileyo, saqala ukusebenza ne ReadyTalk, a Iqonga lesoftware yewebhu, kwaye sathumela eyethu i-webinar uthotho ukubona ukuba yeyiphi le mpikiswano yayithetha ngayo. Sivelise ngaphezulu kwe-600 ekhokelayo ngaphezulu kwee-webinars ezi-3 zamaqabane ethu, kwaye malunga ne-25 ukuya kwi-30% yazo yajika yangumkhokeli ofanelekileyo. Ngaphandle kokuthetha, ii-webinars zaba yenye yezindululo zethu eziphambili zendlela yokuthengisa kwi-2014.
Olunye ufundo olongezelelweyo kukhuthazo lwewebhu, funda inqaku lam kwiingcebiso zokunyusa iwebhinar, Iingcebiso ezili-10 zokuKhuthaza iWebinar yakho elandelayo.
Xa sibeka phambili amaphulo okuthengisa kunye nabaxumi bethu, sihlala sijonga i-ROI yemizamo yethu kwaye yeyiphi eya kuthi ikhokelele kuguquko olungakumbi. Ngelixa ngokuqinisekileyo sasibona utshintsho kwi-webinars, sikwafuna ukubala i-ROI. Kulapho sagqiba kwelokuba sidibane neReadyTalk kwaye senze isixhobo sokubala esibonelela ngoku: ukubala kwi-ROI yewebhu.
Nokuba ukhe wazisebenzisa ii-webinars kwixa elidlulileyo okanye uyaqala nje, ungasebenzisa le khalityhuleyitha uku
Chonga ukuba yintoni inkqubo yakho yewebhu / eya kukuhlawula,
Fumana iingcebiso nge-ROI engcono,
Thelekisa iindleko kudidi ngalunye, kunye
Chonga ukuba ungazisebenzisa njani ii-webinars kumbutho wakho.
Fumana i-ROI yakho yewebhu ngoku:
Sebenzisa iRoyyTalk's ROI Calculator
Ukwazisa: ReadyTalk wayengumthengi wethu kwaye wayexhasa i- Martech Zone.
tags: Ukuthengisa iWebinarReadyTalk sokubalaukubala kwe-roiisixhobo sokubala se roiinkomfa yewebhuingqungquthela yewebhuintlanganiso yewebhuiwebhu yewebhu
Imbuyekezo yeendaba zeNtlalo kutyalo mali awulinganisi
Nantsi indlela yokuvelisa ezinye iiNkokeli ngeMidiya yeNtlalo